Vegetarianisms | The World of Pinkgold
ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ကောင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ သက်သတ်လွတ်စားလေ့ရှိကြပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ ကုသိုလ်ရချင်လို့စားကြတယ်၊ တစ်ချို့ ကတော့သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အသက်ကို ချမ်းသာစေချင်လို့ စသည့်ဖြင့် စိတ်ထားအမျိုးမျိုးနဲ့ စားသောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မတစ်ချက်တော့ တွေးမိတယ်ရှင်. သက်သတ်လွတ်စားတိုင်းသာ ကုသိုလ်ရကြစတမ်းဆိုရင် အရက်သောက်ပြီး အာလူးကြော်ကို အမြည်းအဖြစ်စားနေသူတွေလည်း အလကားနေရင်း ကုသိုလ်တွေရနေမှာပေါ့နော်။ ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒီတော့ကျွန်မတို့ သက်သတ်လွတ်စားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သက်သတ်မလွတ်တာ စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အစားအသောက်စားခြင်းကြောင့် ဘယ်လိုမျိုး ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ အရမ်းကိုသိချင်လာခဲ့ပါတယ်။ တိုင်ဆိုင်စွာပဲ ဆရာတော်ရှင်ဆန္ဒာဓိကရေးထားတဲ့ သက်သတ်လွတ်နဲ့ ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို ကျွန်မအဒေါ်က ယူလာပေးလို့ ဖတ်လိုက်ရတော့မှပဲ စိတ်ထဲရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမြင်သွားပါရဲ့။ ကျွန်ဆီကိုလာရောက် လည်ပတ်သူတွေကိုလည်း ဒီအကြောင်းလေးပြောချင်တာနဲ့ သက်သတ်လွတ်နဲ့ ကုသိုလ်စိတ် စာအုပ်ထဲက တစ်ချို့ကိုရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါကြောင်း………….
အစားအစာတစ်ခုကြောင် လူတစ်ယောက်မှာ ကုသိုလ်စိတ်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို အကုသိုလ်စိတ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင် နှလုံးသွင်းပြီးစားရင် ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နိုင်ပြီး အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင် နှလုံးသွင်းပြီးစားရင် အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစားသက်သက်ကြောင့် ကုသိုလ်စိတ် အကုသိုလ်စိတ် ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အစားအစာကို စားသုံးသူရဲ့ နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်သာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါ။ သက်သတ်လွတ်ပဲစားစား သက်သတ်မလွတ်ပဲစားစား၊ ဘာဝနာတစ်ခုခုပွားရင်း စားရင်ကုသိုလ်ရပါတယ်။ ဘာဝနာတစ်ခုခုပွားစားရင်း စားနေသူရဲ့ သန္တာန်မှာ စားနေဆဲ အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ လောဘ၊ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ ဒေါသ ဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အတွက် အကုသိုလ်စိတ် ကင်းရှင်းနေပါတယ်။ မိမိပွားတဲ့ ဘာဝနာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေနေတဲ့ ကုသိုလ်စိတ် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အစားစားရင်း ကုသိုလ်ရနေပါတယ်။
ဒေါသကိလာသာ လောဘစိတ်တွေနဲ့စားနေရင် အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်စားနေဆဲ အစားအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လောဘ၊ ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစာစားရင်း သူများအကြောင်း၊ တစ်ခြားအကြောင်း တွေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လောဘ ဒေါသတွေ ဖြစ်လာရင်တော့ အကုသိုလ်တွေ ချည်းပါပဲ။
လူတစ်ယောက်ဟာ သက်သတ်လွတ်အစာတစ်ခုကို စားနေတယ်ဆိုပါစို့။ ဟယ်အသားတုဟင်းလေးကရှယ်ပဲ ကောင်းလိုက်တာ ဆိုပြီးတွေးရင် လောဘကိလေသာနဲ့ အကုသိုလ်စိတ်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဟွန်း ဒီနေ့သက်သတ်လွတ်စားမယ်မှန်း သိလျက်နဲ့ ဟင်းကိုကောင်းကောင်း ချက်မထားဘူး၊ တစ်ခါလာလည်း ဒီကန်ဇွန်းရွက်ပဲ ဆိုရင် ဒေါသကိလေသာနဲ့ အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်း ငါမို့လို့ သက်သတ်လွတ် စားနိုင်တာ၊ ဟိုကောင်မတွေဆို သက်သတ်လွတ် စားနိုင်တာမဟုတ်ဘူး ဆိုရင် မာနကိလေသာနဲ့ အကုသိုလ်စိတ်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်စားမှ မေတ္တာသမား၊ သက်သတ်လွတ်စားတာ ကုသိုလ်ရတယ်၊ ငါတော့ဒီနေ့အတော်လေး ကုသိုလ်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ ဒိဌိကိလေသာနဲ့ အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါကအစားအသာနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့ အကုသိုလ်စိတ်တွေပါ။ သက်သတ်လွတ် အစားကိုစားနေရင် သူများအကြောင်းတွေးပြီး လောဘ၊ ဒေါသ၊ မစ္ဆရိယ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း အကုသိုလ်တွေ တိုးပွားနေမှာပါပဲ။
သက်သတ်လွတ်အစာကို စားလိုက်ရုံနဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ အလိုလိုနေရင်း ကုသိုလ်တွေရမသွားပါဘူး။ ကုသိုလ်စိတ်နဲ့စားမှ ကုသိုလ်ရနိုင်ပါတယ်။ ဘ၀နာတစ်ခုခုပွားများခြင်း၊ လောဘ ဒေါသစတဲ့ကိလေသာ မဖြစ်အောင် နှလုံးသွင်းနိုင်မှသာ ကုသိုလ်ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Filed under တရားဓမ္မ |	Leaveacomment